Thenga i-NADH (ityuwa ye-disodium) (606-68-8) hplc %98% - iWisepowder
I-NADH (ityuwa yedisodi) (606-68-8)
I-NADH powder imele “nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) + hydrogen (H).” Le khemikhali yenzeka ngokwendalo emzimbeni kwaye idlala indima kwinkqubo yeekhemikhali evelisa amandla. Abantu basebenzisa izongezo ze-NADH njengeyeza.
I-NADH (i-disodium salt) (606-68-8) ividiyo
I-NADH (i-disodium salt) Ulwazi oluSisiseko
igama I-NADH (ityuwa yedisodi)
Igama leKhemikhali beta-Nicotinamide adenine dinucleotide disodium ityiwa (NADH 2Na)
Iintetho ezifanayo I-NADH (ityuwa yedisodi)
I-Disodium nicotinamide adenine dinucleotide
I-Molecular Formula C21H27N7Na2O14P2
Isisindo somzimba 709.4 g / mol
Indawo yokunyibilika /
InChI Key I-QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
isicelo I-NADH isetyenziselwa ukuphucula ukucaciseka kwengqondo, ukuphaphama, ukugxila kunye nememori; kunye nokunyanga isifo seAlzheimer kunye nesifo sengqondo esixhalabisayo. Ngenxa yendima yayo kwimveliso yamandla, i-NADH ikwasetyenziselwa ukuphucula intsebenzo kunye nokunyanga isifo sokudinwa okungapheliyo (CFS).
I-NADH (i-disodium salt) Inkcazo ngokubanzi
I-NADH powder, okanye ukunciphisa i-nicotinamide adenine dinucleotide, yenziwa emzimbeni wakho kwi-niacin, uhlobo lwe-vitamin B. I-NADH powder idlala indima ekuveliseni amandla emzimbeni kwaye ngamanye amaxesha ithathwa kwifom yokongeza isifo se-fatigue syndrome (ekwabizwa ngokuba yi-myalgic encephalomyelitis okanye i-ME / CFS).
Abanye oogqirha bakholelwa ukuba i-NADH inokunyusa amanqanaba amandla kunye nokuphucula ukucaca kwengqondo, ukuphaphama, uxinzelelo kunye nenkumbulo. Abanye abadlali baye bathathe i-NADH ukuphucula ukusebenza nokunyamezela. Nangona kukho ezinye iziphumo ezithembisayo, ubungqina obuxhasa ukusetyenziswa kwe-NADH kuhlala kuxubekile okanye kuyaphikisana.
I-NADH (ityuwa yedisodi) (606-68-8) Imbali
I-NADH yeyona ndlela incitshisiweyo ye-NAD +, kwaye i-NAD + yeyona fomu i-oxidized ye-NADH, i-coenzyme eyenziwe nge-ribosylnicotinamide 5'-diphosphate edityaniswe ne-adenosine 5'-phosphate ngokudityaniswa kwepyrophosphate. Ifunyanwa ngokubanzi kwindalo kwaye iyabandakanyeka kwiindlela ezininzi zokuphendula kwi-enzymatic apho isebenza njengesixhobo se-elektroniki ngokuba yenye i-oxidized (NAD +) kunye nokuncitshiswa (NADH). Yenza i-NADP ngokudibanisa iqela le-phosphate kwindawo ye-2 'ye-adenosyl nucleotide ngokudibanisa i-ester.
I-NADH (ityuwa yedisodi) Indlela yokusebenza
I-NADH eveliswe yimizimba yethu iyabandakanyeka ekwenzeni amandla emzimbeni. Nangona kukho ubungqina obubonisa ukuba i-NADH izongezo zinganciphisa uxinzelelo lwegazi, i-cholesterol ephantsi, inceda ukukhathala okungapheliyo ngokubonelela ngamandla, kunye nokwandisa iimpawu zentsholongwane kubantu abanesifo sika-Parkinson, akukho lwazi olwaneleyo ukwazi ngokuqinisekileyo okanye ukuba ezi zongezelelo sebenza.
Isicelo se-NADH (i-disodium salt) (606-68-8) Isicelo
Abaxhasi bezongezelelo ze-NADH bakholelwa ukuba banokuzonyusa iziphumo zendalo ze-NADH kwingqondo. Abanye bade baye kuthi ga ngoku bacebise ukuba banokubuyisela inkumbulo kunye nokusebenza kwengqondo kubantu abanesifo i-Alzheimer's.
Ubuninzi bophando lwangoku lujolise ekusetyenzisweni kwe-NADH kunyango lwe-ME / CFS. Ubuninzi bobungqina buyi-anecdotal okanye busekwe kwii-hypotheses ezinengqondo kunokuba kunjalo ngokwenyani.
Phakathi kwezinye zethiyori zokuba kutheni i-NADH inokuba yingenelo:
I-NADH inceda ii-enzymes emzimbeni wakho ukuguqula ukutya kube ngamandla ngendlela ye-adenosine triphosphate (ATP). Izifundo zibonisa ukuba abanye abantu abane-ME / CFS banamanqanaba asezantsi e-ATP.
Uphando lukwabonisa ukuba i-NADH inokukhuthaza ukusebenza kwengqondo, enokunceda ukungasebenzi kakuhle kwengqondo okunxulumana ne-ME / CFS.
I-NADH inokunciphisa ukudinwa ngokubuyisela umsebenzi we-mitochondria (izakhiwo ezincinci ezinika amandla iiseli zakho). I-ME / CFS kukholelwa ukuba ibandakanya ukungasebenzi kakuhle kwe-mitochondrial.
I-NADH inokunceda ingqondo yakho ukuba idale ii-neurotransmitters (iichemicals messenger) eziphembelela ukusebenza kwemeko yokusebenza kwengqondo (kubandakanya i-serotonin, i-norepinephrine, kunye ne-dopamine.)
I-NADH (i-disodium salt) (606-68-8) Uphando ngakumbi
Kukho uphando oluqhubekayo malunga nokuba i-NADH, ehanjiswa ngenaliti okanye nge-intravenously (kwi-vein), inokucothisa ukuqhubela phambili kwesifo sika-Parkinson.
I-NADH (ityuwa yedisodi) (606-68-8) Reference
I-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) ipowder (53-84-9)